महानगरका बैठक पारदर्शी गरेका बालेनलाई मिडियासँग डर किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित) - Himalaya Television
महानगरका बैठक पारदर्शी गरेका बालेनलाई मिडियासँग डर किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
मेयर बालेन साह र पत्रकारबीच भएको के हो ?
२०७९ असार १ गते २१:२४
१ असार २०७९ काठमाडौं । फोहरमैला प्रशोधनबारे रिर्पोटिङ गर्ने क्रममा हिमालय टेलिभिजनका सहकर्मीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दुर्व्यवहार गर्नु भएको छ ।
फोहरमैला प्रशोधन प्लान्टबारे रिपोर्टिङका लागि गइरहेका बेला अचानक भेटिएका मेयर साहले दुर्व्यवहार गर्नु भएको हो । मेयर साहसहित उहाँका सहयोगीले क्यामेरा पर्शनलाई घेरेर फुटेज डिलिट मात्रै गर्न लगाउनु भएन हिमालय टेलिभिजनलाई ठेगान लगाउने धम्कीसमेत दिनुभयो ।
बुधबार फोहरमैला प्रशोधनबारे रिर्पोटिङ गर्ने क्रममा हिमालय टेलिभिजनका सहकर्मीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दुर्व्यवहार गर्नु भएको छ । फरक विषयको रिपोर्टिङमा गएका बेला मेयर साहले सहकर्मी प्रिन्स मिश्र र क्यामरा पर्सन अविष्ट लामामाथि दुर्व्यवहार गर्नुभएको हो ।
हिमालय टेलिभिजनप्रति लक्षित नै गरेर मेयर साहले हिमालय टेलिभिजनको लोगो देख्नेबित्तिकै बाहिर निकाल्नका लागि उहाँसँगै रहेका नगरप्रहरीलाई आदेश दिनुभयो । त्यसपछि हामीले खिचेका फुटेज समेत जबरजस्ती डिलिट गर्न लगाइयो ।
मेयरसँगै वातवरण तथा कृषि विभाग गएका उहाँका सहयोगीले क्यामरा पर्सन अविष्ट लामालाई घेरेर, टेलिभिजनकै गाडीभित्र राखेर जबरजस्ती भिडियो डिलिट गरिदिएका थिए । साथै मेयर साहका सहयोगीहरुले हिमालय टेलिभिजनमै पुगेर क्यामरा खोस्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्दै धम्की दिएका थिए ।
खास भएको के थियो त ?
काठमाडौंको टेकुस्थित युरोपियन युनियनले बनाइदिएको फोहर प्रशोधन प्लान्टको अवस्थाबारे बुझ्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य थियो । सोही उद्देश्यसहित हामी सर्वप्रथम विभागको मुख्य कार्यालय पुग्यौं र विभागीय प्रमुख सरिता राईसँग छोटो अन्तरवार्ता पनि लियौं । त्यसपछि हामी विभागीय प्रमुखकै अनुमतिसहित टेकुस्थित फोहर प्रशोधन उपकरण राखिएको स्थानमा पुग्यौं । त्यहाँ हाम्रो भेट नगर प्रहरी नायव उपरीक्षक पूर्णचन्द्र भट्टसँग भयो । उहाँसँग हामीले प्रशोधन प्लान्टको अवस्था र यसले गर्ने कार्यमा आधारित रहेर अन्तरवार्ता गरेका थियौं ।
त्यसपछि हामी प्लान्टको अनुगमन गर्नका लागि नायव उपरीक्षक भट्टसँगै प्रशोधन प्लान्ट भएको स्थानमै गयौं । उपकरणका बारेमा पर्याप्त जानकारी भएका प्राविधिक ईञ्जिनियरलाई बोलाउन भनेर उपरीक्षक भट्ट आफ्नो कार्यकक्षतिर जानुभयो । त्यहाँ हामीले करिव आधा घण्टा कुर्‍यौँ। तर, उहाँ आउनुभएन । त्यसबीच हामीले उपरीक्षक भट्टलाई ३ पटक फोन समेत गर्यौँ ।
संयोगवस त्यही समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह १०–१५ जनाको टोलीसहित अनुगमनमा आउनुभयो । समय सान्दर्भिक भएको लागेर हामीले उहाँ आएको फुटेज खिच्यौं । त्यसमा न त मेयर साहलाई नराम्रो गर्ने नियत थियो, न त उहाँको कामलाई अवरोध गर्नु नै ।
हामीले त संयोगबस उहाँलाई भेटेपछि छोटो कुरा गर्न पाइन्छ कि भन्ने आशा राखेका थियौं । तर, उहाँले हिमालय टेलिभिजनप्रति लक्षित गरेर धम्की समेत दिनुभएको छ ।
महानगरपालिकाका सम्पूर्ण बैठक पारदर्शी गर्छु भनेर मेयर जितेका बालेन्द्र साह मिडियाका क्यामरासँग किन डराइरहनु भएको छ ?
One thought on “महानगरका बैठक पारदर्शी गरेका बालेनलाई मिडियासँग डर किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)”
जनता को काम गर्ने लाई काम गर्न दिउँ। यसरी पुरै नाइटो देखि को बल लगाएर विरोध न गरौँ हिमालयन TV
TV हेर्ने पनि यिनै जनता हुन जसको काम को लागि बालेन दिन र रात खटिरहेका छन्।
यो जग जाहेर भइसकेको कुरा हो – वालेन एक इमान्दार ,जनता,देश प्रेमी हुन भनेर। दाग त चन्द्रमा मा पनि छ तर त्यसको बारे विरलै कुरा भएको पाइन्छ किन की चन्द्रमा ले दिने प्रकाश,सितलता को अगाडी त्यो दाग केही होइन।
त्यही भएर बालेन को विरोध को चक्कर मा हिमालयन tv जनता बीच अलोकप्रिय होला खयाल गरौँ।